Ndithi huntshu kuwe mongameli | News24
Ndithi huntshu kuwe mongameli
Ngeentsuku zika xakeka kuye kunyanzeleke ukuba kuthathwe izigqibo nokuba zibonakala zingekho zingqondweni kuninzi. Asinto ilula ukusonga izandla ubukele logama kumoshakala, kwaye ke njengoonondaba luxanduva lwethu ukuba sifundise kwaye sixhobise uluntu ngezinto yinto ezichaphazela ubomi bethu kwiindawo ezahlukeneyo.
Logama lo mhlathi ufana ncakasane nalo wesiNgesi, ubhalwe ekhohlo, kubalulekile ukuba ngelinye ixesha senze izinto ezikumile kunje ukuthibaza okanye ukulungisa isimo, ingakumbi ngemihla ka xakeka, imihla ye ntsolongwane i-corona nebizwa ngokuba yi covid-19. Lo gama le ntsholongwane ingumbulalazwe, kubonakala ngokungathi uninzi aluyisi ngqalelo yonke lo nto, kwaye kukho inkolo ethi esi sisifo sabantu abamhlophe, luvo olu lubububhanxa.
Ngawo lo mzuzu kukho uninzi olwanyelisa umongameli Cyril Ramaphosa ngokufaka ilizwe phantsi kolawulo olungqingwa oluthibaza ukuhamba kwabantu isithuba seeveki ezintathu ukususela ezinzulwini zobusuku namhlanje. Logama bambi besithi uthande ukuba ngqwabalala umongameli, inyaniso emsulwa yeyokuba uninzi lwethu lufana nqwa namatakane ebhokhwe.
Kwisithuba esingaphezulu kweveki endlulileyo, umongameli Ramaphosa wabhengeza imigqaliselo eyahlukeneyo ukuzama ukuthibaza ukunwenwa kwale ntsholongwane, endaweni yokuba senze oku kuthiwa masikwenze suka sayibona ibubuvuvu yonke loo migqaliselo.
Kwimpelaveki edlulileyo ndibone uninzi lwabantu luzonwabisa njengesigqelo kwiindawo ezahlukeneyo zolonwabo, noxa kumiselwe umthetho othibaza iindibano zabantu abangaphezulu kwekhulu. Uninzi luphefumlelana njengesingqelo, ingomnye phezu komnye, logama kuthiwe masigcine umgama ongaphezulu kwemitha phakathi kwethu ukuthintela ukunwenwa kwesi sifo. Umbuzo wam ibe ngothi ingaba akukho namnye na kwaba bantu onaso esi sifo?
Ngokweenzululwazi ukunwenwa kwale ntsholongwane kuthatha umntu nje omnye, ihambe ko okomlilo wedobo. Lo nto ithi umntu omnye angenza uninzi luzibone luphila nale ntsholongwane lungaqondanga. Ingxaki emandla kukuba le ntsholongwane iyazifihla emzimbeni ukusukela kusuku ukuya kwisithuba seentsuku ezili 14. Ngamafutshane ungahlala nomntu umbone ephilile kanti sele ekosulele kuba isazifihlile kuye, wothuke sele kophulwe. Kwaye ke ukususela ngela xesha uyifumana nawe uzakuhamba uyisasaza ungaqondanga.
Njengentloko yombuso umongameli unelungelo lokuthatha amanyathelo, nokuba awaqhelekanga, ukulungisa izinto. Logama inyathelo lakhe libonakala lingaginyeki kuninzi, yinto efanelekileyo nebonakalisa ubugorha, ubuthandazwe nokungabilibhetye-bhetye. Ewe kuza kubanzima, kodwa kungcono kwalo nto kunokuba abukele isizwe sitshabalala, kwaye bekumele athatyathwa kudala la manyathelo, abhengezwe ngoMvulo. La manyathelo azakunika urhulumente ithuba lokohlula bonke abantu abachaphazeleke, nobo suleleke yile ntsholongwane, nokuqinisekisa ukuba amanyathelo afanelekileyo ayathatyathwa ukubanika uncedo. Lo nto ithi emva kweentsuku ezingama 21 wonke umntu, kuxhomekeke ekubeni inyanzeliswa kanjani le migqaliselo, bonke abantu abangabonakalisanga zimpawu zesi sifo baphilile, ze kuthi bonke abo banaso bagcinwe ekhusini ukuze bafumane uncedo.
Okona kubalulekileyo ngeli xesha kukuba wonke ubani athobele umthetho angalindi ukubona amajoni okanye amapolisa phambi kokuba enze into elungileyo. Masithathe eli thuba ukuzigcina sikhuselekile, sikhusele nabo sibathandayo.
Konke okwenziwayo kwenzelwa thina sonke kunye nengomso eliqaqambileyo. Ewe abantu baza kuphulukana nemisebenzi kwaye uqoqosho luza kubetheka ngamandla, kodwa kungcono lo nto kunokuba sizibone sele sinentyhikityha yokufa ngenxa yalo mbulala-zwe. Masithintele intsabalalo efana nebangelwe sisifo sika gawulayo kubantu bakuthi, ingakumbi isizwe esimnyama.
Masenze njengoko zisenza zonke ezinye iintlanga singathi esi sifo sisifo sabantu abathile, kungenjalo sakulicula elandincamisayo.